Iqoqo lokuqala leBaotou Steel lamatilili angama-5 000 lithola ukuthengiswa “kwamafu” - China Foshan Hermes Steel
Iqoqo lokuqala leBaotou Steel lamatilili angamathani ayizi-5 000 likwazi ukuthengisa “ngamafu”
NgoMashi 2, iBaotou Steel Sales Company yabika ukuthi inqwaba yokuqala yenkampani yamatilili wensimbi angamathani ayizi-5 000 yayisanda kuzuza ukuthengiswa “kwamafu”, okwaphawula nokuthi ojantshi bakwaBaotou Steel bagxumele “efwini” ngasikhathi sinye.
I-Baotou Steel itholakala eBaotou City, esifundeni esizimele sangaphakathi seMongolia Ingesinye sezisekelo zokuqala zezimboni zensimbi ezakhiwe ngemuva kokusungulwa kweNew China. Ukuba nezinkampani ezimbili ezisohlwini, i- “Baogang Iron and Steel Co., Ltd.” kanye ne- “Baogang Rare Earth”, ingesinye sezisekelo eziphambili zokukhiqiza ujantshi waseChina, esinye sezisekelo zokukhiqiza amapayipi zensimbi ezingenamthungo, kanye nesisekelo esikhulu sokukhiqiza amapuleti eNyakatho China. Futhi kungumsuka futhi omkhulu kunayo yonke embonini yomhlaba engajwayelekile. Ucwaningo lwesayensi lomhlaba olungandile kanye nesisekelo sokukhiqiza.
Ngokwesingeniso, okuhlukile kunendlela yokuthengisa yendabuko, leli yiqoqo lokuqala lamarayili wensimbi athengiswa yiBaotou Steel enxanxatheleni yezitolo iNational Energy e-shopping mall.
INational Energy e-shopping mall iyona kuphela ipulatifomu ye-e-commerce ezisebenza ngokuzimela ye-B2B ngaphakathi kweNational Energy Group. Ihlanganisa ukubhida, ukubuza ngentengo, ukuqhathanisa amanani, kanye nezitolo ezinkulu kuhlelo lokuthengwa kwe-elekthronikhi, okubandakanya izinto ezisezindaweni eziningi zebhizinisi ezifana namalahle, ezokuthutha namandla amasha. Ukuthenga nokusebenzela cishe amayunithi ayi-1 400 eNational Energy Group.
Imithombo esemthethweni ikhombisa ukuthi muva nje, iBaotou Iron & Steel ihole ekuxoxisaneni ngesitimela sohlelo lokuthengisa nge-e-commerce nohlaka oluphethe indawo yezokuthutha yeNational Energy e-shopping mall, yasayina inkontileka yokuthengwa kohlaka, yaba umphakeli wesitimela wokuqala enxanxatheleni yezitolo. Isivumelwano sihlanganisa zonke izinkampani zesitimela ezingaphansi kweNational Energy Group, kanye nojantshi besitimela abasebenza kanzima iBaotou Steel, ojili abacishiwe, ojantshi bomhlaba abangajwayelekile neminye imikhiqizo kukhuthazwe ngempumelelo enkulu.
I-Baotou Steel Group Corporation ithe ngokusetshenziswa ngokujulile kwecebo lezwe le- “Internet +”, iqembu lizokhuthaza ngamandla ukuthengiswa okuhlukahlukene koseyili bensimbi. (Qeda)